Indlu yendlu yegave
I-Agave (ipeni elinesiGrike elihloniphekileyo, elihle kakhulu, eliphawulekayo) laligama layo lihloniphe intombi yomnye wookumkani bamaGrike bamandulo. Kwimvelo, ikhula ngaphezu kweentlobo ze-agave ezingama-300. Ilizwe lakwa-agave liziqithi zeLwandle lweCaribbean, ezinye iintlobo zikhula kwi-Central America nase-USA (eningizimu yelizwe). Kwisiqingatha sesibini senkulungwane ye-16 i-agave yaziswa eYurophu njengento engaqhelekanga, apho yaziwa ngokuba yintlabathi emangalisayo. Ekubeni i-agave isityalo esithandayo ukushisa, kwindawo evulekile ingakhula kuphela kumazwe aseMeditera eCrimea naseCaucasus, kwiindawo ezisezantsi kunye nezenyakatho kunokwenzeka ukuba sikhule i-agaves kuphela kwiindawo zokugcina izitya okanye izimbiza.
Uhlobo oluqhelekileyo lwe-agave yi-American. Ilizwe lalo linguMexico, elibizwa ngokuba yi-agave (ekuguquleleni "indawo ye-agave").
Isityalo sendlu ye-agave sisityalo esingapheliyo nesitshixo esifutshane okanye ukuphela kwayo. Amagqabi amaninzi amakhulu aqokelelwa kwi-rosette rosette efanelekileyo, eqinileyo kumgca kunye neentsiba eziphelweni kunye namacandelo amaqabunga. Amagqabi angaba nemibala eyahlukileyo esuka kwi-grey, eluhlaza, ukuya kwi-shades. Kwezinye iindidi ze-agave, amaqabunga anemikhono emhlophe okanye ephuzi kunye nemivimbo emida. Umphezulu wamagqabantshi uhlanganiswe ngengubo eninzi.
I-Agave isityalo esenza iziqhumane kanye kuphela, emva koko zifa ngokukhawuleza. Xa kutyhutyha, isityalo siphumela intambo enkulu yeentyatyambo (ukuya kwi-10 m), apho i-cologius-inflorescence ifumaneka ngeenkulungwane zeentyantyambo ezincinci ezinemibala ebomvu. Kwiinkqubo zentyantyambo, inzala eninzi eneengcambu zenziwe, ezithatha indawo yokufa.
Kwinqanaba lethu le-agave lwaziwa njengesityalo esincomekayo, esasetyenziselwa ukuyila imibhede yeentyatyambo, izitiya kunye neepaki kunye neentyantyambo, kunye nokutsalwa kwezigadi zasebusika kunye namagumbi amakhulu. Njengesityalo sangaphakathi, i-agave ayiyithandabu.
Njengesityalo sebhodlela, ezo ntlobo ze-agave zisetyenzisiwe, ezahluke ngobukhulu babo obukhulu kunye nokukhula okuncinci konyaka. Isityalo se-agave sivelisa kakuhle ngokukhula, okulula ukunyanga. Ukuzaliswa kwakhona kuveliswa yimbewu, inzala, leyo ifom ephantsi kwesiqu. Inzala iqalelwa kwaye ivumelekile ukuba yomise i-little cut of cut, ibe ityalwe kwinqanawa. Eyona nto ingcono yokukhula ayinakunyulwa, iindawo ezikhanyayo kunye nelanga. Izityalo ezinjengokuthambisa okulinganayo. Ebusika, izityalo kufuneka zigcinwe kwindawo epholile kwaye eyomileyo, apho kukho ukukhanya okukhulu. Ngokungabikho kwemini, ilanga elikhanyayo lithengiswa ngokukhawuleza. Ukunkcenkceshela kubumnene kakhulu.
Indawo. I-Agave ikwahlulo lwezityalo ezingazithobekiyo. Uvakalelwa kakhulu kwiintsuku ezishisa kakhulu elangeni, ukhula kakuhle kwi-penumbra. Ngoko umhlaba onomsoco walolu hlobo lwesityalo luqulethe isanti enkulu yomlambo kunye nemifuno yemifuno. Lo mxube uxutywe ngokugqibeleleyo kwaye uxutywe. Ngaphantsi kwebhodeni, kufuneka kuthulwe amanzi okucoca (kuyona nto ingcono ukusebenzisa izitena ezaphukileyo kunye neebhokhwe zobumba). Xa ukutyala kuyimfuneko ukuqinisekisa ukuba intamo yesityalo ayinqunywanga, ngaphandle koko isityalo siya kubola kule ndawo kwaye ekugqibeleni sifele. Umlomo wesibeleko kufuneka ukhule malunga no-1, 5-2 cm. Izityalo ezingafikeli ubude be-15 cm zitshintshwa ngonyaka. Emva kokuba lo bukhulu bufezekiswe, ukutshintshwa kwenziwa kanye emva kweminyaka embalwa.
Ukunyamekela. Ehlobo, isityalo sinamanzi ngokulinganayo, qiniseka ukuba umhlaba ulalela kancane, zama ukutshintsha isityalo. Ebusika, ukunyusa kwenziwa ngeyanye ngenyanga. Isiqhamo sisoloko singasifakwanga, inhlanganisela engcono yokufafaza kukugqoka okuphezulu (ehlobo). Ngenxa yoko, isisombululo se-"Buton" isetyenziswe, ehlanjululwa kwisilinganiselo se-1 g ngetitha yamanzi. Ukubambelela kangcono kwesisombululo kumaqabunga esityalo, umz. isepha yolwelo, kukulungele ukusebenzisa isepha ngaphandle kokuncedisa izongezelo.
Esi sivuno sinyamekela ukugqoka okuphezulu, okufuneka kwenziwe rhoqo (kungekho rhoqo kathathu ngenyanga). I-Nitrofosc (L) kunye ne-liquid "Sodium Humate" (st.l), "Agricola" yeenkcubeko zokuhlobisa (tsp) kunye nochumiso oluthile lwamanzi "Ross", ubugcisa. l. ). Zonke izichumisi zicetyiswa ukuba zenzeke. Ukususela kwizinto eziza kukhethwa indlela yokugqoka ingcambu ephezulu kuxhomekeke kumandla kunye nokukhula kwesityalo. Ukuxilisa nokugqwesa phezulu, amanzi ahleliweyo okushisa kwegumbi asetyenziswa. Musa ukuthululela amanzi abandayo, ubeka engozini ngonaphakade kwi-pet yakho.
Izinambuzane. Njengazo zonke izityalo, i-agave ihlaselwa yizinambuzane kwaye ihlaselwa zizifo. Iintshaba eziphambili ze-agave ziyi-spider mite, i-aphid kunye ne-scab. Ekulweni nabo ngokusebenzisa iziyobisi ezifana ne: "Iskra" (thabatha iipilisi eziyi-1/10 ngesigidi-litre zamanzi). Kwaye nxamnye nomkhwa, isilwanyana "Aktara" siyasebenza, ehlanjululwa kwisilinganiselo se-1g ukuya kuma-5 ilitha amanzi aqhelekileyo.
Izityalo ezingaphandle: i-cataract
Izityalo ezingaphakathi ngaphakathi kwendlu
Ukukhula kwe-rosemary kwigumbi
Indlela yokugcina izityalo zangaphakathi eziphilileyo
Isityalo esingaphandle kwe-phalaenopsis, ukunakekelwa
Cannes - iintyatyambo: i-agrotechnics, ubusika
Indlela yokugcina iintyatyambo ezinqambileyo?
Iladidi ebomvu iklabishi
Ukwahlukana kwintetho yeemvakalelo kubantu abadala kunye nabantwana
Cannelloni ngeeshizi kunye ne-tomato puree
Zindlela ezimbalwa zokukholisa umntu
Ungancibilikisa njani ushokoledi ekhaya
Iindlela zokulwa ne-asthenia
Iziphumo emva kokunwebisa kwepiki
Ukunyamekelwa kweenwele emva kokuqedwa
Ukhohlakele ngomyeni, ukuxolela njani?
I-Horoscope ye-Sagittarius-amadoda ngo-2016 - uthando kunye nomnyaka wokuzalwa
Ukukhulelwa kokukhulelwa kokuqala
Kutheni uphupha ukuba uyalunywa yinja?